Wadashaqeeynta Mp Iyo Dawladda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wadashaqeeynta Mp Iyo Dawladda
La daabacay tisdag 28 september 2010 kl 16.44
Xisbigga Doogga ayaa sheegay inuu diyaar u yahay siduu wada-shaqeeyn ula sameeyn lahaa garabka Isku-tagga Iswiidhen, marka laga hadlayo siyaasadda la xiriirta magan-gelyo doonka iyo siyaasadda is dhex-galka. Si looga hor-tago saameeyn uu dawladda ku yeesho xisbiga Sverigedimoqoraadigu.
Sida ku caddeyd kulan ey maalintii isniinta yeesheen madaxa dawladda Fredrik Reinfeldt iyo labada hogaamiye ee xisbiga Dooggu, hase yeeshee aannu xisbiga Dooggu diyaar u ahayn wada shaqeeyn ballaaran ee dhinacyo badan. Sidoo kale ey dhici karaan wada shaqeeyn su’aalo gaar ah, si xal loogu helo xaaladda hoowlaha baarlamanka iyo aqlabiyad darrida dawladda.
Maanta oo salaasa ah ayuu sidoo klale madaxa dawladdu Fredrik Reinfeldt kulan la qaatay hogaamiyaha xisbiga Sooshiyaaldimoqoraadiga Mona Sahlin, isagoona u cadeeyay inuu ku talo jiro inuu xukunka sii hayo.
Xisbiga Doogga ayaa muddo toddobaad gudihiis ka soo dabcay diidmadii mayada ahayd una soo dabcay wada shaqeeyn garabka Isku-tagga uu la sameeyo, halka weli uu xisbigu sheegayo in wada shaqeeyntii garabka Casaan-cagaarkuna halkeedii ka sii socon doono.
Maria Wetterstrand, kana mid ah labada hogaamiye ee xisbiga Doogga, ayaa shaaca ka qaaday in xisbigeedu ku tala jiro siduu masuuliyadda kala gudboon uga qaadi lahaa marxaladda cusub ee hoowlaha baarlamanka doorashadii dabadeed.
- Waxaan diyaar u nahay in aan su’aalaha qaarkood xal kaga wada gaarno baarlamanka. Iyadoona kuwa aan haddadan ku fekereeyno yihiin siyaasadda soo-galootiga, is dhex-galka, magan-gelyo doonka iyo xuquuqda bani’aadamka si looga hor istaago in xisbiga SD saameeyn kuwaa ku yeesho.
Waxaa sidoo kale hogaanka sii heeyn doona afarta sannadood ee foodda innagu soo heysa xisbiyada ku bahoobay garabka midig ee Isku-tagga Iswiidhen, haddii ey heshiisyo ku wada gaaraan su’aalaha siyaasadda garabyada mucaaradka si ey aqlabiyad ugu yeeshaan.
Mudaneyaal ka tirsan xisbiyada garabka midig una ololeeya siyaasadda soo galootiga ayaa sheegay iney ku faraxsan yihiin jawaabta xisbiga Doogga si uu ula shaqeeyo su’aalaha la xiriira soo galootiga, magan-gelyo doonka iyo siyaasadda is dhex-galka. Fredrik Federley waa mudane xisbiga Dhexe uga tirsan xubnaha baarlamanka, ahna af-hayeenka arrimmaha socdaalka ee xisbiga.
Ulf Nilsson, ahna dhiggiisa xisbiga Shacabka, ayaa sidoo kale samaan u arka, iyo in wada shaqeeyntaasi aanay noqon mid kala dhantaasha xulufada garabka midig.
Sida uu sheegay Gunnar Axén, kana tirsan xisbiga Mudaraatka, in aan hadda lagu talo jirin isbedello sidaa u waaweeyn ee lagu sameeyo siyaasadda soo-galootiga. Iyadoona midda iminka taagani tahay daryeelka caafimaad ee soo-galootiga dhuumaaleeysiga dalka ku jooga. Waa arrin uu xisbiga Mudaraatku meel shishe ka taagan yahay marka loo bar-bar dhigo xisbiga Doogga. Hase yeeshee Gunnar Axén ayaan iska dheereeyn in su’aashaa laga wada xaajoon karo marka laga hadlayo wada shaqeeynta xisbiyada.
Af-hayeenka xisbiga SD Linus Bylund ayaa sheegay mar uu u warramayay idaacadda caalamiga ah ee raadiyaha iswiidhen, inay tahay wax tiiraanyo leh in maamulka dawladdu siyaasadda soo galootiga wada shaqeeyn kala yeesho xisbiga ugu fog marka su’aalahaa laga hadlayo. Middaana ula jeeday in xisbiga Dooggu qabo in cafis guud loo fidiyo soo galootiga dalka ku sugan dhammaantii. Waxey u keeni doontaa diidmo ey kala hor yimaadaan taageereyaasha xisbiyada garabka midig, waana xisbi ku yeelan doona saameeyn ballaaran mustaqbalka.
Su’aasha taagani waxay tahay, xaggay ku dambeeyn doontaa wada shaqeeynta garabka Casaan-cagaarku. Iyadoo ay Mona Sahlin, hogaamiyaha xisbiga Sooshiyaaldimoqoraadiga oo saaka ey kulan wada qaateen madaxa dawladda Fredrik Reinfeldt ay dabadeed sheegtay in wada shaqeeyn garabka midig iyo xisbiga Doogga ee la xiriira su’aalo ey ka mid yihiin soo-galootiga iyo is dhex-galku yihiin kuwo uu xisbiga Dooggu taageero kaga haysto garabka Casaan-cagaarka. Iyadoona qudheedu u aragto in xisbigeedu wada shaqeeyn la sameeyn karo garabka midig.
- Waa muhiim in xisbiyada aaminsan habka dimoqoraadiyaddu ey middaa ka wada xaajoodaan, waan calaamad u muujinaysa baarlamanka gebi ahaan. Waa su’aalo aan wax badan ka mideeysannahay xisbigeeyga iyo kan Mudaraatku iyo farriin wanaagsan ee loo diro baarlamanka iyo bulshada gebi ahaanba. Mana dooneeyno in tii Danmark ka dhacday oo kale na qabsato. Waa su’aalaha noocaasiya kuwa ey ku guuleeysteen saameeyntooda xisbiyada xag-jirka ahi.
Xisbiga Bidixda (V) ayaa ka soo horjeestay tallaabada uu xisbiga Dooggu wada shaqeeynta kula yeelanayo garabka midig. Kalle Larsson Af-hayeenka siyaasadda soo-galootiga ee xisbiga Bidixda:
- Waxay ila tahay in falkaasi yahay mid istaraatiijiyad iyo xeelad ahaanba ku qaldan, in heshiis la xiriira siyaasadda soo-galootiga lala galo xisbiga Mudaraatka.
Waa xisbigii dalka hogaaminayay afartii sannadood ee ugu dambeeyey. Hogaankaasina dhaliyay in dib loogu celiyo dadyoow magan-gelyo doon ah waddmmo ey dagaallo ka socdaan, in aan haweenka xaqooda magan-gelyo doon si dhab ah loo eegin iyo in la tarxiilay dhallaan xannuunsanaya. Waxay ila tahay siyaasad aan hagaagsanayn marka loo barbar dhigo midda aannu hor-boodeeyno in dalka laga hirgeliyo.
Hase yeeshee Magnus Johansson, kana mid ah xubnaha hogaanka xisbiga ayaa u arka si fikirkaa ka duwan:
- Waxaan u aragnaa in aan masuuliyadda dhanka nagaga aadan ka qaadno iyada oo lagu jiro xaalad adag ee hoowlaha baarlamanka. Waxaa soo baxay war cad ee ka soo yeeray madaxa dawladda oo sheegay inuu aqlabiyad la’aan damacsan yahay inuu dalka ku hogaamiyo, halka sidoo kale uu jiro garab Casaan-cagaar iyo xisbiga SD oo isaguna baarlamanka soo galay oo labada garab u dhaxeeya. Waxaan dawladda iyo taageereyaashayadaba u sheegeeynaa in aannu diyaar u nahay intii awooddeena ah inaan isku dayno sidii dalka siyaasad wanaagsan loogu dhaqi lahaa. Wanaagga dalkuna wuxuu ku jiraa jawi cimilo fur-furnaan ee caalamka, waxaa sidoo kale loo baahan yahay siyaasad qeexan sidii xididadda loogu siibi lahaa cunsuriyadda, kala faqooqnaanta guryaha iyo sidoo kale siyaasadda shaqada una sahleysa ruuxa siduu noloshiisa masuuliyad uga qaadi lahaa.
12-ka bisha oktoober ayaa looga fadhiyaa madaxa dawladdu Reinfeldt inuu baarlamanka hor keeno qorshaha miisaaniyaddiisa ee sannadka foodda innagu soo haya. Waana su’aal aan illaa hadda jawaabteeda la shaacin in iyaguna garabka Casaan-cagaarku dhankiisa ka soo bandhigi doono miisaaniyad uu ka mideeysan yahay, sida ay sheegtay Maria Wetterstrand:
- Waxaan ka tallaabo qaadeynaa in xulufada garabka Casaan-cagaarku halkiisa ka sii jiro. Inaan soo bandhigno miisaaniyad garabkayagu u dhan yahay maaha mid weli aan go’aan ka gaarnay. Mana aha su’aal aan ka xaajoonay sidii aan ka yeeli lahayn weli.